कोरोना खोप लिने पहिलो नर्सको अनुभव : पहिले डर थियो, नेपालमा खोप आएपछि हरायो
# कोरोना विरुद्धको खोप अभियान
माघ १४, २०७७ ११:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लिने पहिलो नर्स शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण टेकुकी आईसीयू इन्चार्ज उषा देवकोटा हुनुभएको छ । उहाँले बुधबार सुरु भएको खोप अभियानमा नेपालभरका नर्सहरुमध्ये पहिलो खोप लगाउनु भएको हो ।
खोप लगाएपछि देवकोटाले खोपप्रति पहिले डर भएको भएपनि नेपालमै आइसकेपछि डर हराएको बताउनुभएको छ । ‘पहिले सुन्दा डर लागेको थियो । सुरक्षामा शंका भएको हल्ला हुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जब नेपालमै यो आइपुगेपछि त डर हराएर गयो । मेन्टल्ली खोप लगाउनुपर्छ भनेर तयारी भयौँ ।’
उहाँले खोप लगाएपछि आफूमा अरू केही नभएको अनुभव बताउनुभयो । आफूलाई आधा घण्टा निगरानी गरिए पनि कुनै अप्ठ्यारो महसुस नभएको र अहिले नियमित काममा लागेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै खोप सुरक्षित भएको बताउँदै उहाँले यो लगाउन डराउन नहुने बताउनुभयो । ‘डराउन चाहिँ मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ढुक्क भएर खोप लगाउँदा हुन्छ । हाम्रो दिमागमा यसको असर हुन्छ भन्ने पनि छैन र हुँदैन पनि ।’
नेपालमा कोरोना खोपप्रति उत्साह बढ्दै
नर्सिङ पेशाकाे दायरा नबढ्दा नर्सहरू बेराेजगार !
कोरोना उपचारमा खटिनेले पाएनन् तर मन्त्रालयमा बस्नेलाई थरीथरी भत्ता
टेकु अस्पतालमा खोप लगाएका २३ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई देखियाे यस्ताे लक्षण
कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप डा. राजभण्डारी र बाँस्तोलाले लगाउने
५ महिनादेखि एक महिला कोरोना संक्रमित, ३१ पटक पोजेटिभ
प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि कोरोना खोप लगाउनु हुँदै
कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन मार्चको दोस्रो साता सार्वजनिक गरिने
सोमबार हृदयघात हुने सम्भावना बढी : अध्ययन
३ दिनमा २५५ सांसदसहित १२३९ जनाले लगाए कोरोना खोप
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङ अब फेरी दिनहुँ हुने
देशभर थपिए १२० संक्रमित, सक्रिय संक्रमित ८३२
कोरोना विरुद्धको खोप अभियान
खोपकाे साइड इफेक्ट
३१ पटक कोरोना पोजेटिभ